पाराग्लाइडिङमा छलाङ- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार
भाद्र १४, २०७५ दीपक परियार
लेखनाथ (कास्की) — पाराग्लाइडिङको नियम हो– जमिनबाट हावामा छलाङ मार्नु । हावामा कावा खाँदै फेरि जमिन टेक्नु । २० वर्षपछि पाराग्लाइडिङको एसियाड छलाङ कम्ता रोचक छैन ।
सन् १९९९ मा पाराग्लाइडिङ भित्र्याउँदा पोखराका बिरु बम्जनले सायदै सोचेका थिए, यो खेलका रूपमा विकास हुन्छ र एसियाडमा पदक दिलाउँछ । त्यो पनि पहिलो ‘इन्ट्री’ मै ।
पोखरामा केही विदेशी आए । पारासुट बोकेर सराङकोटबाट हामफाले । चिलजस्तै एकनासले उडदै फेवा किनारमा ओर्लिए । पोखराका पर्यटक व्यवसायीले सोचे, ‘यस्तो पनि सम्भव छ ?’ बम्जन त्यतिखेर ट्रेकिङ एजेन्सी चलाउँथे ।
उनी ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) पोखराका अध्यक्ष थिए । त्यतिबेलै बेलायती नागरिक एडम हिल अन्नपूर्ण सर्किटको पदयात्रामा आए । डाँडाकाँडा नियाले । उनको भेट बम्जनसँग भयो । उनले सराङकोटबाट पाराग्लाइडिङ गर्न सकिने सम्भावना देखाए । दुवै मिलेर व्यावसायिक पाराग्लाइडिङ चलाउने निधो गरे । दुवैको सोच मिलेपछि जन्मियो ‘सनराइज पाराग्लाइडिङ कम्पनी’ ।
सनराइज ट्रेकिङ एजेन्सी चलाइरहेका बम्जनले सुरुसुरुमा पदयात्रामा आउने विदेशी पर्यटकलाई पाराग्लाइडिङ गराए । ‘पहिले पाराग्लाइडिङ गर्न सकिन्छ भन्दा कसैले पत्याएनन्,’ उनी भन्छन्, ‘सुरक्षित हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउनै गाह्रो भयो ।’ उनकै सिको गर्दै सन् २००७ सम्म आइपुग्दा ४ कम्पनी खुले । सन् २०१० तिरबाट बल्ल पाराग्लाइडिङले व्यावसायिक रूप पाएको व्यवसायी वसन्तराज दवाडी सम्झिन्छन् ।
नेपाल हवाई खेलकुद संस्था (ना) का महासचिवसमेत रहेका उनी पहिले विदेशीले मात्रै चासो देखाएको बताउँछन् । उनका अनुसार सन् २००४ देखि युवापुस्ता आकर्षित भए । नेपालमै पाइलट उत्पादन भए । सन् २०१० मा आउँदा साहसिक खेलमा दरियो । अहिले बाह्यभन्दा पनि आन्तरिक पर्यटकले पाराग्लाइडिङ धानेका छन् । विदेशी पाइलटलाई पनि नेपालीले विस्थापित गरेका छन् । ‘२००८ सम्म यसलाई खेल नै होइन भनिन्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘राखेपबाट मान्यता पाएपछि मात्रै खेल पनि रहेछ भनेर बुझ्न थालियो ।’
पाराग्लाइडिङका लागि सराङकोट विश्वकै दुर्लभ क्षेत्र मानिन्छ । सराङकोटसँगै तोरेपानी र मान्द्रेढुंगाबाट व्यावसायिक रूपमा पाराग्लाइडिङ उडान हुन्छन् । नाले नेपालमा १८ औं संस्करणसम्म राष्ट्रिय च्याम्पियनसिप, एक एक पटक एसियाली च्याम्पियनसिप र दुईपल्ट प्रि–वल्र्डकप आयोजना गरिसकेको छ ।
यसै वर्ष नेपालमै वल्र्डकपको आयोजना अनुमति दिलाउने नाको तयारी छ । पाराग्लाइडिङको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फेडेरेसन अफ इन्टरनेसनल एरोनोटिकल (एफएआई) ले प्रि–वल्र्डकप र वल्र्डकप आयोजना गर्न स्वीकृति दिनुपर्छ । नाले दुई वर्ष लगातार एफएआई क्याटगोरी टु पाराग्लाइडिङ च्याम्पियनसिप गरेपछि प्रि–वल्र्डकपको बाटो खुलेको थियो ।
पोखरामा व्यावसायिक उडान गराउने ६२ पाराग्लाइडिङ कम्पनी छन् । ती कम्पनीमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) बाट अस्थायी लाइसेन्सप्राप्त ३ सय पाइलट छन् । खेलकुदमा सहभागी हुन नेपाल हवाई खेलकुद संस्था (ना) बाट छुट्टै लाइसेन्स लिनुपर्छ । त्यसरी लाइसेन्स लिने पाइलट २५ मात्रै छन् ।
पोखराका ब्लु स्काई ºलाइङ स्कुल र बाबु एड्भेन्चरले पाराग्लाइडिङ पाइलटको व्यावसायिक प्रशिक्षण दिन्छन् । पोखराको सराङकोटबाहेक धरान, स्याङजा, बन्दीपुर, पाल्पा, काठमाडौं र सुर्खेतमा क्यानले पाराग्लाइडिङको अनुमति दिएको छ । पोखराबाहेक अन्यत्र पनि पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न नाले राखेपसँग धरानमा ट्रेनिङ सेन्टर बनाउन प्रस्ताव गरिसकेको छ । उदयपुर जिल्लाको बेलका नगरपालिकाले बेलकाको रामपुर ठोक्सिलामा पाराग्लाइडिङ तालिम प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालनका लागि स्कुल स्थापना गरेको छ ।
पाराग्लाइडिङ पाइलटको कोर्स पूरा गर्न करिब तीन वर्ष लाग्छ । १५ दिने आधारभूत तालिमपछि दुई वर्षसम्म एक्लै उडाउनुपर्छ । जसमा एड्भान्स र सुरक्षा तालिमसमेत दिइन्छ । पाइलट बन्न तीन लाख रुपैयाँ खर्च लाग्छ । व्यावसायिक उडानका लागि लाइसेन्स लिनुपर्ने हुन्छ । क्यान पोखरा, नेपाल हवाई खेलकुद संस्था (ना) र नेपाल पाराग्लाइडिङ पाइलट्स क्लबले लाइसेन्स वितरण गर्छन् ।
सराङकोटमा उडानबापतको भ्याट पाइलटले तिरे, नतिरेको प्रहरीले जाँच गर्छ । हाल सिजनमा अधिकतम ३ सय जना र न्यूनतम १ सय जनाले दैनिक पाराग्लाइडिङ गर्छन् । कम्पनी र पाइलटमा भएको वृद्धिले भविष्यमा पाराग्लाइडिङ पाइलटले काम नपाउने अवस्थाको सिर्जना हुने चिन्ता बढ्दै गएको छ ।
नाका महासचिव दवाडी एसियाडमा नेपालको प्रदर्शन सन्तोषजनक भएको बताउँछन् । ‘योभन्दा पनि राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने आशा थियो,’ उनी भन्छन्, ‘पहिलोपल्ट समावेश भएको खेलमा पदक जित्नु खुसीकै कुरा हो ।’ अन्तर्राष्ट्रिस्तरमा भाग लिन सक्ने खेलाडी जन्मिइसक्दा पनि सरकारले भने खासै चासो नदिएको उनको अनुभव छ ।
उनी भन्छन्, ‘व्यवसायीले नै रकम उठाएर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा खेलाडी पठाउँदै आएका थियौं । एसियाडमा मात्रै सरकारले सक्रियता देखायो ।’ केही महिनाअघि चीनमा भएको प्रि–वल्र्डकपमा विशाल थापाले तेस्रो स्थान हासिल गरेका थिए । इन्डोनेसियामै भएको प्रतियोगितामा नेपाल टिम च्याम्पियन बनेको थियो । महिलाको हकमा कुनै पनि विदेशी प्रतियोगितामा सहभागिता जनाएको पहिलोपल्ट हो ।
खेलमा निरन्तर प्रगति गर्दै गए पनि व्यावसायिक हिसाबमा उल्लेख्य हुन नसकेको गुनासो व्यवसायीको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न भएपछि सराङकोटबाट कता जाने भन्ने चिन्ता थपिएको छ ।
प्रकाशित : भाद्र १४, २०७५ ०७:३०
लेखनाथ — काठमाडौंबाट केही थान रंगकर्मी हराएका छन् । उनीहरू कहाँ छन्, के गर्दै छन् धेरैलाई अत्तोपत्तो छैन । केही दिनयता हराएका देशभरका १४ युवा निर्देशक यतिखेर पोखरामा भेटिन्छन् ।
उनीहरू साउन १७ देखि यतै छन् । लामो समय बिहानदेखि बेलुकासम्म नाटक निर्माण कार्यशालामै व्यस्त भए । काठमाडौंको मण्डला थिएटरको पहलमा एक महिना लामो कार्यशालामा जुटेका देशभरका युवा निर्देशकले नाटक निर्माणका आन्द्राभुँडी खोतलेका छन् । उनीहरूले अध्ययन मात्रै गरेनन्, अभ्यास गर्दै नाटक नै तयार पारेका छन्, जुन शुक्रबारदेखि पोखरा थिएटरमा मञ्चन जारी छ ।
मण्डलाका राजन खतिवडाका अनुसार गत वर्षको भदौमा पनि नगरकोटमा एक हप्ता लामो कार्यशाला चलेको थियो । त्यहीं कार्यशालालाई निरन्तरता दिन यस पटक मण्डलाले पोखरा रोज्यो ।
कार्यशालामा आफूहरूले खुला प्रतिस्पर्धाबाटै सहजकर्ताको खोजी गरेको पनि उनले बताए । आवेदन दिनेमा चार विदेशी पनि थिए । संयोगवश दिल्लीको नेसनल स्कुल अफ ड्रामामा पढेर आएका नेपालकै विमल सुवेदी छानिए । उनैले निर्माण प्रक्रियासहित सहभागीलाई नाटक पढाइरहेका छन् । खतिवडाले कार्यशालाको सह–सहजकर्ताको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । द्वन्द्वको समयमा बेपत्ता पारिएका नागरिकको परिवारका समस्या नाटकमा देखाइएको छ । नाटकको नाम रहेको छ— खबर हराएको चिठी ।
कार्यशालाका सहभागीले सुरुको एक हप्ता पोखरा नजिकैको पर्यटकीय गाउँ कालाबाङ घरेडीमा बिताए । उनीहरूले सशस्त्र द्वन्द्वमा बेपत्ता भएका नागरिकको मुद्दा केलाए । त्यसमाथि छलफल चल्यो । उक्त एक हप्तामा नाटकको ‘कन्टेन्ट’ तयार भएको सहजकर्ता सुवेदी बताउँछन् । सहभागीले थिएटरमा दैनिक अभ्यास गर्दै नाटक तयार पारेका हुन् । सिजन दाहाल र केदार श्रेष्ठले आलेख तयार पारेका छन् । आकांक्षा कार्की, किरण चाम्लिङ राई, चेतन आङथुपो, चे शंकर, पत्रिका घिमिरे, परिवर्तन, पशुपति राई, रेनुका कार्की, सुदाम सिके र सोनाम लामाले अभिनयको पाटो सम्हालेका छन् । निर्देशक सबै नै भइहाले । नाटकको संयोजन स्वयं खतिवडाले गरेका छन् ।
सहजकर्ता सुवेदी कार्यशालामा सैद्धान्तिकभन्दा क्रियात्मक अभ्यासलाई जोड दिएको बताउँछन् । नाटकका प्राविधिक पक्ष मात्र नभई सामाजिक संरचनासँग जोडिन प्रेरित गरिरहेको उनले बताए । ‘सहभागीले आफैंले आफैंलाई कसरी बुझ्ने, आफ्नो प्रतिविम्ब कसरी झल्काउने भन्ने कार्यशालामा सिक्नेछन्,’ उनी भन्छन्, ‘समाजप्रति निर्देशक, कलाकार कति संवेदनशील बन्नुपर्छ भन्नेबारेमा पनि सचेत गराइएको छ ।’ कार्यशालाका सहभागीले नाटकलाई प्रभावकारी बनाउन ‘कन्टेन्ट’ मा धेरै मिहिनेत गरेको उनले बताए । उनले भने, ‘नाटकलाई उत्कृष्ट बनाउन सबै सहभागीको उत्तिकै परिश्रम परेको छ ।’
समूहले कार्यशालाकै अवधिमा पोखरा वरपरका १२ बेपत्ता नागरिकका परिवारलाई भेटेको थियो । परिवारको अहिलेको आर्थिक, सामाजिक अवस्था, उनीहरूको भोगाइसँग सम्बन्धित रहेको सहभागीले कुराकानी गरे । नाटकका संयोजक खतिवडा बेपत्ता नागरिकका परिवारको दैनिक जीवन बुझ्न उक्त भेटघाटले सघाएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘उनीहरूको मनमा के चलिरहेको छ भन्ने निर्देशकले महसुस गरून् भन्ने हाम्रो उद्देश्य थियो ।’ त्यसो त उनी नाटकलाई अभियानको रूपमा लिन्छन् ।
नाटक मनोरञ्जनको विधा मात्र नभई समाजको अवस्था देखाउने प्रभावकारी माध्यम बन्नुपर्ने उनको धारणा छ । ‘अहिलेसम्म हाम्रो नाटक देखाउने शैलीमा परिवर्तन हुन सकेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘अब भने अभियानको रूपमा पनि अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कार्यशालाको उद्देश्य हो ।’ रंगकर्मीले पनि सामाजिक, राजनीतिक मुद्दामा बोल्नबाट पर भाग्न नहुने उनको तर्क छ ।
मण्डलाकै रंगकर्मी सोमनाथ खनाल नाटकले निष्कर्ष पस्किनुभन्दा पनि विषयवस्तुको उठान गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । ‘कुन पक्षले बेपत्ता पार्‍यो भन्ने विषय होइन,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले उनीहरूको अवस्था कस्तो छ ? उनीहरूलाई समाजमा कसरी हेरिन्छ ? अरूलाई उनीहरूको पीडा महसुस गराउन के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नाटकमा आउनेछन् ।’ प्रयोगात्मक नाटक भएकाले पोखरेली दर्शकले यसबाट फरकपनको महसुस गर्ने उनको आशा छ । पोखरामा नाटकप्रतिको चेतना वृद्धि हुँदै गएकाले पनि कार्यशाला गर्न उपयुक्त लागेको उनले सुनाए । पोखरा थिएटर बनेपछि पहिलोपल्ट मञ्चन भएको सरुभक्तको नाटक ‘सिरुमारानी’ उनैले निर्देशन गरेका थिए ।
प्रकाशित : भाद्र १०, २०७५ ०८:३८